स्टिकरहरू - Print Peppermint
डिजाइन ब्लग / पर्चा
भर्खरका स्टिकर लेखहरू
प्रिन्ट डिजाइन / पर्चा
स्टीकर मार्केटिंग बेनिफिट्स: Re कारण व्यवसायहरूले स्टिकरहरूको साथ प्रचार गर्नु पर्छ
केवल किनभने धेरै सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूले विश्वलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्, यसको मतलब तिनीहरू मार्केटिंग संसारलाई पूर्ण रूपमा लिइसकेका छैनन्। हो, मार्केटिंगका लागि सोशल मिडिया प्रयोग गर्नका धेरै फाइदाहरू छन् र व्यवसायहरूले फाइदा लिनुपर्दछ, तर अफलाईन मार्केटिंग युक्तिहरूका फाइदाहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ छन् ... थप पढ्नुहोस्
व्यापार / मार्केटिङ / पर्चा
स्टिकर मार्केटिङ 101: के व्यवसायिक स्टिकरहरू अझै सान्दर्भिक छन्?
के व्यवसायिक स्टिकरहरू अझै सान्दर्भिक छन्? सबैले स्टिकरहरू मन पराउँछन्। र स्टिकर मार्केटिङले आज पनि काम गर्ने एउटा कारण हो। यदि तपाईं व्यापार स्टिकरहरूको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, केही रोचक स्टिकर तथ्यहरूको लागि वरिपरि रहनुहोस्! प्रचारात्मक स्टिकरहरू नयाँ छैनन्। तर त्यहाँ एउटा कारण छ किन तिनीहरू आज पनि प्रयोग भइरहेका छन्: तिनीहरू काम गर्छन्। सबैले मन पराउने… थप पढ्नुहोस्
मार्केटिङ / मुद्रण / पर्चा
यसलाई स्टिकरको साथ मानिसमा टाँसिनुहोस्!
तपाईंको समुदायलाई स्टिकरहरूको साथ संलग्न गर्नुहोस्! किन तपाईको सन्देशलाई मात्र जब तपाई यसलाई दुई खुट्टामा घुम्न सक्नुहुन्छ? परिचय स्टिकरहरू - एक अद्भुत आविष्कार हामीले वास्तवमा आविष्कार गरेका थिएनौं। स्टिकरहरू तपाईलाई भन्नु पर्ने कुराकानीको लागि व्यक्तिहरूलाई अन्तर्क्रिया गर्न उत्प्रेरणा दिने उत्कृष्ट हुन्छन्। सहि डिजाईनले टाउको फेर्न सक्छ र बन्न सक्छ ... थप पढ्नुहोस्